SANADGUURADA 3AAD EE URURKA (HANAD) OO LAGU QABTAY MUQDISHO
Sanadguuradii 3aad ee aas aaskii daladda Haweeynka Nabadda iyo Diob-u heshiisiinta Soomaliyeed ee G/Banaadir oo loo yaqaan Hanad ayaa maanta waxaa si weeyn looga xusay magaladda muqdisho, iyadoo lagu soo bandhigay waxqabadkii daladaasi ee mudaddii sedexdda sanno aheyd ee ay Jirsatay.
Xaflad Balaaran oo loo dhigay Daladaasi, ayna aka qeeyb galeen xubno badan oo ka kala socday qeeybaha kala duwan ee haweeynka soomaliyed ayaa lagu qabtay magaaladda Muqdisho.
Ugu horeyn waxaa munasabadaasi ka hadlay Gudoomiyaha daladda Haweeynka nabadda iyo Dib-u heshiisiinta Soomaliyeed ee G.Banaadir Drs. Marwo Ruqiya Cali Cabdulle iyadoo ugu horeeyn soo koobatay waxqabadkii Daladda mudaddii sedexda sanno aheyd, waxaayna sheegtay in daladda la asaasay Sanadkii 2008dii bishii lixaad, waxqabadkeeduna uu yahay dib u heshiisiin in ay ka dhacdo dalka guud ahaan .
Marwo ruqiya waxaa kaloo ay sheegay 8/8/2010kii ay daladdu kormeer ku sameysay guud ahan kaamamka ku yalla muqdisho ee barakacayasha ay ku jiraan si loo ogaaddo xaladoodda nololeeyd, si loo gargaaro , gaar ahaan kuwoodda ku jira dugsiga 21ka Oktobar , sidoo kalan ruqiya waxaay sheegtay in 16/10/2010 hay’adda CRD ay u fidisay siminaar soconayay 4 bilood kaas oo ujeedadda laga lahaa uu ahaa laba weji oo kala ah Horumarinta Nabadda iyo mamulka iyo maareynta, si kor loogu qaado hawlaha kala duwan ee daladda Hanad.
Gudoomyaha Daladda Haweenka Hanad ayaa xustay in daladda HANAD haweeynka ku midoobay oo gaaraayay in ka badan 500 oo haweyn ah ay dhiseen 12kii Nov, 2010i Ururka Haweenka Qaranka Soomaliyeed ee ay gudoomiye ka tahay Marwo Caasha Geesdiir ayna ku xigeen ka tahay Canab Xasan Cilmi, kaas oo haatan dalka ka qabtay hawlo badan. sidoo kale waxaa ay kaloo sheegtay in 1/3/2011 waxaa dib loo habeeyay Nidaamkii lagu dhisay HANAD, waxaa kaloo wax qabadka Haweenka HANAD qabatay 28kii 4/2011.
Siminaar ku sabasan wecyegelinta Bulshadda, kadib markii uu soo shacbaxay khilaadkii u dhaxeeyay madaxdda sare sare ee dawladda, taas oo leeysku raacay in gacan buuxdda la siiiyo dawladda si loogaga baxo isqabqabsiga dawladda ee ragadiyay mudadda labadda sanno aheyd.
Guddoomiyaha waxaa kaloo ay ka warbixisay qorshaha guud ee daladda ee muqtaqbalka waxayna xustay in ay u qorsheysan tahay sidii loo sii laba laabi-lahaa wax qabadka Ururka Haweenka HANAD.
Munasabadaasi waxaa kaloo ka hadlay Agaasimaha maamulka wasaaradda haweynka ee xukuumadda soomaliyeed Marwo Sucdi Maxamed Aadan, Raxmo Daahir, Caasho Warsame, Abshiro Axmed maalin iyo xubno kale kuwaasi oo xusay guud ahaan in daladdu ay tahay mid qabatay hawlo badan loona baahan yahay in la sii labalaabo, gaar ahaana dhinacyadda waxbarashadda iyo caafimaadka iyo nabada intaba.
Gabagabdii waxa halkaasi laga soo saaray Baaq ka koobanaa sedex Qodob oo kala aha mid kuwajahan dawladda KMG ah oo ah in wixii hadda ka dambeeya aanan loo bahneeyn khilaaf dambe,wax walbana lagu xaliyo miiska wadahadalka si bulshadda loogaga saro dhibka.
Sidoo kale bulshadda Soomaliyeed waxaa loogu baaqay in ay nabadda ka shaqeeyaan ayna Ogaadan cidna uma maqna celna uma qodna. Iyo ugu dambeyn haweeynka Soomaliyeed in ay midoobaan gacmahana is qabsadaan si ay u garaan hilimadoodda fog.
Gabagabadii waxaay halkaasi ku soo bandhigeen qaar ka mid ah haweynkii ka qeyb galay munasabadaasi barnaamijyo iskugu jiray buraanburo iyo Halkudhigyo ka turjumayay haweynka somaliyeed.iyo sida ay ugu heelan yihiin in ay dalka iyo dadka wax u qabtaan.
HANAD Editorial News